iAfrika – Page 114 – iAfrika
Uma uphupha ubona umyeni noma unkosikazi wakho, kusho ukuthi uzophumelela ezintweni ozenzayo – ikakhulukazi emsebenzini. Uma ungowesifazane oshadile uphupha ukuthi ulwa nomunye wamakhosikazi omyeni wakho, kusho ukuthi uzama ukunihlukanisa nomyeni wakho. Uma uwina manilwa, kusho ukuthi imizamo yakho ayisebenzi noma umuthi wakhe awunawo amandla anele. iAfrika
Uma uphupha ukuthi uqabula uphathina wakho, kuyibhadi ngoba ubudlelwane benu buzophela maduzane. Uma kungumyeni noma unkosikazi wakho, kungenzeka bathandane nomunye umuntu. Uma nje kungumuntu omuhle, kuyinhlanhla futhi kusho ukuthi kukhona ozokusiza uphume enkingeni maduzane. iAfrika
Uma uphupha ukuthi ungcolile, kuwuphawu lwesikhathi esinzima ekusaseni lakho. Kusho kakhulu ukuthi kungenzeka ube namahloni ngenxa yento oyenzayo. Uma ungcolile ngoba omunye umuntu ekujikijela ngezinto, kusho ukuthi uzokwenza izitha, ngakho qaphela izinto ozitshela abantu. Kodwa uma ungcole ngoba uwile phansi, kusho ukuthi uzokhuthuzwa noma ulahlekelwe yimali maduzane. iAfrika
Ukubhala Uma uphupha ukuthi uyabhala, kusho izinto ezinhle uma iphepha lihlanzekile linobunono – uzoba nomshado onenjabulo kanye nezingane ezinhle. Uma uzama ukubhala kodwa ungakwazi, noma uklebhula iphepha, kusho ukuthi awuhlakaniphile ngendlela oyicabangayo futhi uzozithola usenkingeni maduzane. iAfrika
Uma uphupha ukuthi uyabhukuda kuwuphawu oluhle uma ikhanda lakho lingaphezulu kwamanzi – ikakhulukazi emsebenzini nasebudlelwaneni bakho nabanye. Uma amanzi ehlanzekile ecwebile kuhle kakhulu. Uma ubhukuda phansi kwamanzi kusho ukuthi kunezinkinga ezizayo kuwe ikakhulukazi uma amanzi efiphele. iAfrika